I-china lumkela abaxhamli beenkonzo zefowuni ezinobungozi mveliso kunye nabenzi | APS
LUMKELA ABAHLAWULELA IIMPAWU EZIYINGOZI
Kwenzekile kuthi sonke. Uphumile kwaye malunga nokuqonda ukuba ifowuni iyasebenza. Kuqheleke ngakumbi xa useluhambeni. Iindawo zokulinda isikhululo seenqwelomoya zihlala zinamaqela oonomathotholo abajikeleze iivenkile kunye neziqwengana zamandla.
Ngelishwa, umkhonyovu obizwa ngokuba yi "juice jacking" wenza ukuba ukutshajisa ifowuni okanye ithebhulethi yakho kube yingozi. Ijusi jacking yenzeka xa amazibuko e-USB okanye iintambo zisulelwe yimalware. Xa ufaka intambo okanye izibuko elosulelekileyo, abakhohlisi bakhona. Zimbini iindlela ezahlukeneyo zokugrogrisa. Enye yeyokuba idatha ibiwe, kwaye yile nto ivakala ngathi. Ufakela kwizibuko elonakeleyo okanye intambo kwaye iiphasiwedi zakho okanye enye idatha inokubiwa. Okwesibini kukufakwa kwe-malware. Xa uqhagamshela kwizibuko okanye intambo, i-malware ifakwe kwisixhobo sakho. Nokuba sele ukhuphe iplagi, i-malware iya kuhlala kwisixhobo de uyisuse.
Ukuza kuthi ga ngoku, ijusi jacking ibonakala ngathi ayixhaphakanga. Iqela lodonga lokucheba iigusha libonakalisile ukuba linokwenzeka, ke uluntu kufuneka lulumke-ngakumbi kuba iintambo ze-USB zikhangeleka zingenabungozi.
1.Thabatha iitshaja zodonga kunye ne- car chargers with you when you’re traveling.
Musa ukusebenzisa iintambo ezifumaneka kwiindawo zikawonke-wonke.
Sebenzisa iishaja zodonga, hayi izikhululo zokutshaja ze-USB, xa ifowuni yakho iphantsi.
4.Tyala kwindawo yogcino yebhetri ephathekayo kwaye uyigcine ihlawulisiwe kwimeko kaxakeka.
5.Yiba ne-anti-malware app efana neeMalwarebyte kwizixhobo zakho kwaye uqhuba ukuskena rhoqo.
Isaphulelo se-Usb, Iselula Ishaja, Ukutshaja kwemoto ngokukhawuleza kunye neCable, Ukukhawulezisa ukuKhangela kwePcb, Iplagi yeAdppter Pcba, Ishaja ye-Usb ecekisekayo,